सामाजिक कार्यको नेतृत्व गर्दा परिवारकै प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ । बोलीको मधुरताका कारण विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट यथेष्ट सहयोग पाइनेछ । सानातिना काममा अलमलिँदा महत्वपूर्ण काम छुट्न सक्छन् । आफ्नो प्रयासलाई तीव्रता दिन सके अपेक्षाअनुरुप सफलता हात लाग्नेछ । याक्रा गर्दा स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला । पुरा पढ्नुहोस्
स्टुडेन्ट अफ द इयर–२ बाट बलिउडमा पदार्पण गरेकी चंकी पाण्डेकी छोरी अनन्या पाण्डे चलचित्रमा आउनु अघिदेखि नै चर्चामा छाइरहन्थिन् । यतिबेला अनन्या आफ्नो लभलाइफका कारण चर्चामा छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
पाँच वर्षअघि यो चलचित्रको छायांकन हुँदा मैले राम्रै मेहनत गर्नुपर्‍यो भनेर वीरेन्द्र हमालसँग उक्त चरित्रमा आधारित भएर विशेष प्रशिक्षण नै लिएको थिएँ । हामीले देखेको एउटै पोज र एउटै तस्बिरका आधारमा यस्तो हुन सक्छ भन्ने किसिमले काम गरेका छौं । पुरा पढ्नुहोस्
पोखरा आउने क्रममा पटक–पटक रेस्टुराँमा आउनेछौँ भनेर वाचा गरे । करिश्माले यसो भनेपछि राजेशले सोधिहाले । हामी सँगै आउँछौं कि एक्ला–एक्लै ? जवाफमा करिष्माले भनिन्– तपाईं कोहीसँग म कोहीसँग, आए पनि हुन्छ । त्यसपछि सहभागीहरूको हाँसोको फोहोरा छुट्यो । पुरा पढ्नुहोस्
तपाइंलाई थाहा छ, हाछ्युँ गरेर पनि पैसा कमाइन्छ भन्ने कुरा ? हामीकहाँ त हाछ्युँ गर्‍यो भने कि रुघा लागेको भनिन्छ, कि साइत बिगारेको, तर वेल्सकी एक १८ वर्षीया युवतीले भने हाछ्युँ गरेरै राम्रो आम्दानी गरिरहेकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
सिर्जना दुवाल श्रेष्ठ, असार ६, २०७६
होटलमा गाउनेहरू खतरा नै हुन्छन्, किनभने उनीहरू हजारौं गीत गाउन सक्छन् । आफ्नो मात्र गीत गाउनेहरूमा अरूका गीत गाउने बानी हुँदैन । उनीहरू आफ्नै शैलीमा मात्र पोख्त हुन्छन्, भर्सटाइल हुन सक्दैनन् । पुरा पढ्नुहोस्
क्रिकेटमा विकेट लिएपछि खुसियाली मनाउने पनि आ–आफ्नै शैली हुन्छ । यसमध्ये केही शैलीले निकै चर्चा पाउँछन् । यस्तै कारणले चर्चामा रहेका बलर हुन्— वेस्ट इन्डिजका सेल्डन कोट्रेल । उनी विकेट लिएपछि सेनाले जस्तो स्यालुट ठोकेर खुसियाली मनाउँछन् । पुरा पढ्नुहोस्
संकलक : जीवन भट्टराई, असार ६, २०७६
खडानन्द हरिबोलको घरमा पुगे ।हरिबोल ः ल कस्तो ठिक्क टाइममा आइपुगिछस् यार, लु भन्, खिर खान्छस् कि हलुवा ?खडानन्द ः हैन हौ हरि, तेरो घरमा एउटै मात्र कचौरा छ कि क्या हो ???? पुरा पढ्नुहोस्
नवीन पोखरेल, असार ६, २०७६
नेपालको नेवार समुदाय र गुठी परम्पराका बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका एक ब्रिटिस प्राध्यापक डा. डेभिड गेल्नरले नेपालले गुठीहरूको पहिचानका लागि राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोमा निवेदन दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
राजेश हमाल, सधै हिट । चलचित्रमा काम गरेपनि हिट, नगरेपनि हिट । ३ बर्ष पुग्यो, यि अभिनेताका कुनैपनि चलचित्र प्रदर्शन भएका छैनन् । पटक–पटक स्क्रिप्ट पढेपनि उनलाई चित्त बुझेन । तर, राम्रो विषयबस्तु भेटेको खण्डमा चलचित्रमा काम गर्ने बताइरहेका थिए । पुरा पढ्नुहोस्